सङ्घर्ष गरेर पढिरहेका छोरीहरू - नेपालबहस
सङ्घर्ष गरेर पढिरहेका छोरीहरू
१२ फागुण २०७७ | १०:२३:३९ मा प्रकाशित
१२ फागुन,टीकापुर । कैलालीको धनगढीकी अस्मिता चौधरीले बालिका हुँदा कम्लहरी देखेकी थिइन् तर उनलाई आफू पनि कम्लहरी बस्नुपर्ला भन्ने लागेको थिएन । अस्मिता आठ वर्षकी थिइन् । स्थानीय नवदुर्गा विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत अस्मिताको घरमा आमाबुवा रहँदा जसोतसो जीवन चलिरहेको थियो । अस्मिताका बुवाको मृत्युपछि अस्मिताले पढ्ने, खेल्ने उमेरमा कम्लहरी बन्नुप¥यो । “बुवाको मृत्युपछि घरमा अर्थाभाव शुरु भयो । हामीलाई पढाउनभन्दा आमालाई हाम्रा लागि खानाको जोहो गर्न नै समस्या हुन थाल्यो”, अस्मिताले भनीन्, “पेट पाल्नकै लागि भए पनि कम्लहरी बस्नुपर्ने अवस्था आयो । आमाले कम्लहरी बसे पढाइमा पनि सघाउने घर खोजीन् । ”
आमाले कम्लहरी बसे पढ्न पनि पाइन्छ भनेपछि कम्लहरी बस्न सहमत भएकी अस्मितालाई निराशा नै हात लाग्यो । कम्लहरी बसे पनि पढाइ छुट्यो । डेढ वर्षपछि अस्मितालाई कम्लहरी विकास मञ्च नामक संस्थाले उद्धार गरेर पुनः विद्यालय पढ्ने वातावरण मिलाइदियो । विसं २०६९ मा कैलालीको टीकापुरस्थित सरस्वती मावि वनगाँउमा छात्रवृत्तिमै पढ्ने अवसर पाइन् । तर लामो समयसम्म पढाइ छाड्नुपरेकाले ५ कक्षा पढिसकेकी अस्मिताले फेरि कक्षा ३ मा भर्ना हुनुप¥यो । “मैले पहिले पढेका कुरा बिर्सिसकेकी थिएँँ । मलाई तल्लो कक्षा अर्थात् ३ कक्षामा भर्ना गरियो । मैले फेरि पढ्ने चाहना पूरा गर्ने अवसर पाएँ”, उनले भनीन्, “पढाइमा लगन भए बाधा अप्ठेरा आए पनि विद्यार्थीलाई अघि बढ्नबाट रोक्न सक्दैन भनेजस्तै अवसर मेरो जीवनमा मिल्यो । म विस्तारै पढाइमा राम्रो बन्दै गएँ ।” अस्मिताले विसं २०७६ मा राम्रो अङ्क ल्याइ एसइई उत्तीर्ण गरिन् । अहिले टीकापुरमा विज्ञान विषय लिएर पढ्दै छिन् ।
अस्मिताजस्तै १५ वर्षीया करुणा बादी पनि सङ्घर्ष गर्दै पढाइलाई अगाडि बढाउँदै छिन् । कक्षा १० मा अध्ययनरत उनका बुवा पेशाले डकर्मी र आमा गृहणी हुन् । आठ जनाको संयुक्त परिवार । त्यसमा पनि चार जना विद्यालय जाने उमेरका । बुवाआमाकै काँधमा परिवारको पालनपोषणको जिम्मा भएकाले करुणालाई घरको कामको बोझ बढी छ । घरको काम गर्नुपर्ने, भाइ बहिनी स्याहार्नुपर्ने भएकाले करुणालाई पढाइका लागि समय निकाल्न हम्मेहम्मे पर्छ । “साँझ बिहान घरको काम गर्छु । आमाबुवा काम गर्न जान्छन्, मभन्दा पछिका भाइबहिनी पनि स्याहार्नुपर्छ”, करुणाले भनीन्, “कामको व्यस्तताले कहिलेकाहीँ गृहकार्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो गरिबीमा पनि बुवाआमाले हामीलाई पढाइरहेका छन् ।”
अभाव, समस्या झेलेर भए पनि अस्मिता र करुणाहरू पढ्दैछन् अघि बढ्दैछन् । घरमा कामको जिम्मेवारी, अर्थाभाव झेलेर पनि अध्ययन गरिरहेका छोरीका अभिभावकले छोरीको शिक्षाका लागि कठिन सङ्घर्ष गरेर भए पनि पढ्ने वातावरण मिलाइरहेका छन् । “कहिलेकाहीँ कापी किताब, कलम हुँदैन, बुवाआमाले ऋण गरेर भए पनि जोहो गरिदिन्छन्”, करुणा भन्छिन्, “मलाई घरको काम गराउनु अभिभावकको पनि बाध्यता बनेको छ । उनीहरूले काम नगरे हाम्रो पेट नै भरिदैन ।”
विभिन्न संस्कार र घरको कामको बोझ थुपारेर छोरीहरू शिक्षा लिनबाट बञ्चित भइरहेका छन् । छोरीलाई घरको काम बढी लगाइँदा वा पढ्ने उमेरका छोरीहरूको श्रमलाई आम्दानीसँग जोड्दा छोरीको शिक्षामा असर परेको छ । यसरी काममा लगाइँदा छोरीलाई परिवारबाटै शिक्षा आर्जनमा बाधा पुग्ने अधिकारकर्मी कल्पना उपाध्याय बताउछिन् । “यस्तो अप्ठेरोमा पनि छोरीहरू सङ्घर्ष गरेर शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन् । छोरीहरूले सुख र दुःख एकअर्काको परिपूरक हुन् भनेर बुझेर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्”, उनी भन्छिन्, “समस्या, अभाव र अप्ठ्याराका बीच भए पनि छोरीहरू पढे घर सुन्दर बन्छ । उनीहरू आफ्नो जीवन सहज चलाउन सक्षम हुन्छन् ।”
विगतमा छोरी पढाउनु हुँदैन भन्ने समाजमा निकै सङ्घर्ष गरेर पढेर शिक्षिका भएकी टीकापुर–८ स्थित त्रिभुवन मावि बटनपुरकी शिक्षिका जयसरा साउद अहिले छोरीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउने माध्यम बनिरहेकी छिन् । “मैले विद्यालय पढ्दा छिमेकीले समेत कुरा काट्थे । ठूली भइसकेपछि म आफैँ विद्यालय भर्ना हुन आएकी थिएँ”, साउद सम्झन्छिन्, “म यही विद्यालयमा कक्षा १० सम्म पढेँ, ३० वर्षदेखि यही विद्यालयमा शिक्षण गरिरहेकी छु । हाल मलाई प्रेरणाका रूपमा लिनेहरू धेरै छन् । म नपढेको भए हाल यहाँ हुने थिइनँ ।”
टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावल चालु शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेको बताउछन् । “हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी लगानी गरेका छौँ । यस वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बहानामा उठाइने शुल्क बन्द गरेका छौँ”, नगरप्रमुख रावलले भने, “निजी स्रोतका शिक्षकको तलब नगरपालिकाले दिन्छ, विद्यालय व्यवस्थापनका लागि चाहिने सबै खर्चसमेत नगरपालिकाले ब्यहोर्न थालेको छ । अब विद्यालयमा कुनै किसिमको शुल्क लिए कारवाही हुन्छ ।”
रामकोटलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने अभियान ओझेलमा भर्खरै
देउवा –राजदूत भेटघाट ४ मिनेट पहिले
पर्यटकको आकर्षण बन्दै छहरा झरना ११ मिनेट पहिले
आज मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै १३ मिनेट पहिले
नेप्सेमा दुई लघुवित्तको शेयरमूल्य समायोजन २१ मिनेट पहिले
कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीको अवस्‍था गम्‍भीर २४ मिनेट पहिले
विद्यालयको आफ्नै छात्रावास भवन बन्ने २६ मिनेट पहिले
बैकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ २६ मिनेट पहिले
दुई महिलालाई टर्की पुर्‍याई बेचबिखन गर्ने २ जना पक्राउ २९ मिनेट पहिले
क्यान्भासमा पोतीएका महजोडी ३२ मिनेट पहिले
गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको मुद्दाका फरार ३ जना पक्राउ ३४ मिनेट पहिले
लैंगिक उत्तरदायी अनुसन्धान तथा संचारका सीप प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न ३७ मिनेट पहिले
सञ्चारकर्मी बिष्णु ठकुरीको मन फाटेपछी ४६ मिनेट पहिले
पार्टीको आधिकारिक धारणा नेताहरूबाट बुझ्‍न श्रेष्ठकाे आग्रह ५३ मिनेट पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर कति थपिए संक्रमित ? २० घण्टा पहिले
ओली र कांग्रेसबीच गठबन्धन भई नयाँ सरकार बन्छ : मोहनविक्रम २२ घण्टा पहिले
भारतमा पेट्रोलको मूल्य अत्यधिक बढेपछि सत्तापक्षबाटै विरोध २३ घण्टा पहिले
प्रदेशसभा बैठक केही दिन स्थगित गर्ने कि सुचारु ? ३ हप्ता पहिले
कंगना अभिनित चलचित्र धाकडको पोस्टर सार्वजनिक २ हप्ता पहिले
गजल : माया बसेपछि प्रेम पत्र २ हप्ता पहिले
निःशुल्क पशु बीमा कार्यक्रम सुरु ३ महिना पहिले
बाढीपहिरोले डडेल्धुराका आधा दर्जन ग्रामीण सडक अवरुद्ध ८ महिना पहिले
भारत र चीनको सम्बन्ध सुधारले नेपालको समृद्धि यात्रा अनुकूल : प्रधानमन्त्री ओली १ वर्ष पहिले
प्रेस लोकतन्त्रको अक्सिजन हो : पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव १ वर्ष पहिले